बुढो रुखको कथा
यो एकादेशको एउटा रुखको प्रचलित कथा हो । कुनै समयमा त्यो देशमा स्याउको रुख थियो । त्यो रुखमा खेल्न भनेर दिनहुँ जसो एउटा सानो फुच्चे आउँदथ्यो, उस्को नाम राम थियो । राम दिनभरी त्यो रुख वरिपरि बस्दथ्यो, घरि रुख चड्दथ्यो त घरि त्यस्को वरिपरि घुम्ने खेल खेल्दथ्यो । भोक लागेपछि त्यो रुखको स्याउ टिपेर खान्थ्यो । त्यो रुख र राम एकअर्काका जुट्टी साथी थिए । उनीहरु घन्टाँै गफ पनि गर्दथे ।
हावामा फिलिली उड्दा ...
सारङ्कोटको शीर, हरियो घाँसे भीर, असार ३० गतेको नौ बजे बिहानी । साथी राजेन्द्र ज्ञवाली र म पहिला त डाडोको टुप्पोमै रहेको फेमिली रिजर्टमा अघिल्लो दिन देखी तैनाथ थियौ । दुई घण्टा कुर्यौ, हुस्सु निख्रिएकै हैन । त्यो डाँडोमा एउटा गज्जब कै मेला थियो । थरिथरिका मान्छे, थरिथरिका मुलुकबाट त्यहाँ बेग्लै उत्साहका साथ प्याराग्लाइडिङ् गर्न भनेर आएका थिए । थुप्रै प्यारआग्लिडिङ कम्पनीहरु आफ्ना–आफ्नै टेक–अफ पोइन्टमा ग्लाइडरहरु बिछ््याँउदै र परिक्षण गर्दै थिए । प्यासेन्जरहरु माथिल्लो भागमा घेरा बनाई थुचुक्कै बसेका थिए । पाइलटहरु कोही झोला भिर्दै, कोही ग्लाइडरका डोरिहरु जाँच गर्दै थिए ।
मेरो जन्मदिन पनि अगस्टमै पर्छ भन्ने कुरा जुलाई महिना देखी नै रोजर फेडेरर लगायतका सेलेब्रिटिले “लेजेन्ड्स आर बर्न इन अगस्ट” भन्ने टि सर्ट लगाएको फोटो सोसल मिडियामा भाईरल भएपछी याद थियो । अगस्ट महिना आएपछी भुसुक्कै बिर्सेंछु । अनि यस्तै कुनै घमाइलो दिन एउटा साथीनीले सोधी – “तेरो जन्मदिन चाँही कहिले होरे? चक्लेट त खुवाउछस होलानि?” झल्यास्स याद आयो– हैट जन्मदिन त आजै पो थियो त । कत्तिन केक्केन दिग्बिजय गर्या जस्तो, बर्थ्डे आउनसाथ के केक चक्लेट वा रेस्टुरेन्टमा डाइनिङ लानु पर्ने ठेक्कै ल्या जस्तो ? हुनत मलाई जन्मदिनमा कुनै उत्साह छैन । बर्थ्डे विस गर्न पनि मन लाग्दैन, खान पनि । आजसम्म मनाएको पनि छैन ।